पर्यटकीय गन्तव्य Archives - Lokpati.com
Tag - पर्यटकीय गन्तव्य
विश्वमै सबैभन्दा प्रख्यात नेपालका अठार पर्यटकीय गन्तव्य
काठमाडौं। नेपालीहरूमा बढ्दै गएको घुमफिरप्रतिको मोहले आन्तरिक पर्यटनलाई समेत सघाउन थालेको छ । नयाँ वर्षमा घुमफिरडटकमको दृष्टिमा नेपालकै उतकृष्ट गन्तब्यहरु पोखरा, सौराहा, रारा, जोमसोम, चित्लाङ, नगरकोट, धुलिखेल, इलाम, भेडेटार...
पटिहानी व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
चितवन, २३ जेठ । पश्चिम चितवनको पटिहानीलाई व्यवस्थित गन्तव्य बनाउन जोड दिइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको पटिहानीमा पछिल्लो समय पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएपछि व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
धौलागिरीमा नयाँ गन्तव्य : सम्भव छ जीप फ्लायर ?
दुर्लुङदेखि बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौर बलेवामा रहेको भैरवस्थानसम्म, जो समुन्द्री सतहदेखि २२०८ मिटर अग्लो जीप लाइन गराउन सके त्यहाँको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन मद्दत पुग्ने र नयाँ गन्तव्य पनि बन्नसक्ने थियो।
विश्वका १९ औं उत्कृष्ट गन्तव्यमा काठमाडौँ
काठमाडौँ, १३ चैत । नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ। सन् २०१९ मा घुम्नैपर्ने विश्वका उत्कृष्ट २५ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौं १९औँ स्थानमा परेको छ।
घुमफिर र यात्राबारे यात्रीलाई विस्तृत विवरण प्रदान गर्ने...
कालो सूचिबाट हटाउन आग्रह : कति सुरक्षित छ नेपाली आकाश ?
काठमाडौँ । नेपालका विमानलाई युरोपको आकाशमा उडाउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले युरोपेली सङ्घका एक जना वरिष्ठ अधिकारीसँग त्यस्तो अनुरोध गरेका...
जनयुद्धको आधार किल्ला जलजला अब पर्यटकीय गन्तव्य
रोल्पा, १३ फागुन । रोल्पाका सांसद तथा वर्तमान सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन यतिबेला रोल्पामा आर्थिक उपार्जन कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । रोल्पामा व्यस्त पुन जिल्लाका कसरी आर्थिक उपार्जन बढाउने...
सो क्रममा नेकपा अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री...
गण्डकीमा थपिएका १९ पर्यटकीय गन्तव्य
दमौली, २० कात्तिक । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागि गण्डकी प्रदेशको १९ ठाउँलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा छनोट गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र...
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन...
सरकारसँग वार्ताका लागि विप्लव नेकपाद्वारा प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली गठन :
सभामुख सापकोटा र प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुबीच छलफल